ခက်မာ: ဆောင်းဦး 1. 2.
မနေ့ က၀ါရှင်တန်စကွဲရ်ပန်းခြံနားမှာလမ်းလျှောက်ရင်း မေရီသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း ဘီလ် ကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပြန်တွေ့ ခဲ့သည်။
သူမကလှမ်းခေါ်လိုက်သည်။ သူမခေါ်သံကြောင့် ဘီလ်ကလမ်းလျှောက်နေရာမှရပ်ကာလှည့် ကြည့်သည်။ ပထမတော့ သူမကိုဘီလ်မမှတ်မိပေ။ သူ့ အတွက်တော့ မေရီကအတော်အိုစာသွားပြီ။
သူအနမ်းနှင့်နှုတ်ဆက်လေမလားဟု မေရီကသတိလက်လွတ်မျက်နှာကိုမော့ပေးလိုက်မိသော် လည်း ဘီလ်ကလက်ကိုသာကမ်းပေးလေသည်။ မေရီသည်ဘီ့လ်လက်ကို ဆွဲကိုင်လှုပ်ယမ်း၍နှုတ်ဆက်လိုက် သည်။
ဘီလ်ကယဉ်ကျေးစွာပြုံးလိုက်သည်။ ပြီးတော့သူ့မျက်လုံးနှစ်ခုအကြားတွင် မျက်မှောင်အကြုံအကွေး
“ ရှင်ဘာတွေလုပ်နေခဲ့သလဲလို့ကျမအမြဲတန်းသိချင်နေခဲ့တာဘီလ်ရဲ့ “
“ ကိုယ်ကရှေ့ နေလေ။ မြို့ ထဲကတော်တော်အခြေအနေကောင်းတဲ့ ရှေ့ နေလုပ်ငန်းစုတစ်ခုမှာပေါ့။"
ပန်းခြံအတွင်းရှိ သူတို့ မသိသောလူများစွာက သူတို့ ကိုကွေ့ ရှောင်ဖြတ်သန်း၍သွားနေကြသည်။
“ မင်းကြည့်ရတာ…“ ကျသွားလိုက်တာဟု သူကဆက်ပြောချင်နေသည်။
မေရီကလည်းနားလည်ပါသည်။ ၀ါရှင်တန်စကွဲရ်ပန်းခြံထဲက သစ်ပင်တွေအောက်မှာရပ်ရင်း အတိတ်ကိုပြန် ရောက်သွားသလို သူမလွမ်းလွမ်းဆွတ်ဆွတ်ခံစားနေရသည်။ အိုဟိုင်းယိုးတွင်နေကြစဉ် ကတည်းက သူမက ဘီလ်ထက်အသက်ပိုကြီးခဲ့တာပဲ။ ခုတော့ သူမတကယ်ပဲမငယ်တော့ပါ။ ဘီလ်ကတော့နုပျိုဆဲပင်ဖြစ်သည်။
“ ကျမတို့ အိမ်ကို တခါတလေလာလည်ပါဦး“
“ မင်းနဲ့ မင်းခင်ပွန်းလည်း ကိုယ်တို့ မိသားစုနဲ့ ညနေစာလာစားရမယ်နော်။ ဘယ်ညပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ လူစီနဲ့ကိုယ်က မင်းတို့နဲ့ဆုံချင်ပါတယ်။“
ပန်းခြံအတွင်းရှိသစ်ပင်များပေါ်မှသစ်ရွက်များက လေမတိုက်ပဲနှင့်တဖြည်းဖြည်းချင်းကြွေကျနေ ကြသည်။ ဆောင်းဦးရာသီ၏ နေ၀င်ဖြိုးဖျမှာ မေရီနည်းနည်းဖျားချင်သလိုလိုဖြစ်လာသည်။
ဘီလ်ကပြုံးစေ့စေ့ဖြင့်ပြောသည်။လေထုထဲသို့ မြူတွေကျလာသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအပြာရောင် အလင်းကြောင့် ပဉ္စမရိပ်သာလမ်းမကြီးတလျှောက်အရောင်တွေထွန်းတောက်လာ၏။
“ ဟော.. ကျမစီးရမယ့်ကားလာနေပြီ။“
မေရီကထိုသို့ ရေရွတ်လိုက်တော့ ဘီလ်ကလက်ကိုဆန့်တန်းပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်သည်။
သူမကတစုံတခုပြောလိုက်ချင်ပေမယ့် ဘတ်စ်ကားကထွက်ဖို့ ပြင်နေပြီ။ လမ်းမပေါ်တွင်အလင်း
ရောင်တွေကတလက်လက်တောက်ပလာလိုက်၊ေ၀၀ါးသွားလိုက်။ သူမကကားထဲရောက်နေပြီမို့စကားဆက်ဖို့ စိုးရိမ်ဆုတ်ဆိုင်းသွားသည်။ ထိုစိုးထိတ်မှုနှင့်တော့ စကားတခွန်းတလေထွက်ဖို့ပင်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဘတ်စ်ကားနှင့်ဘီလ်ကြားမှာ လူတွေအစုန်အဆန်ဖြတ်သန်းသွားလာနေကြသည်။ သူတို့မသိသော လူတွေကသူတို့ကိုကွယ်လိုက်ကြသည်။ ဘတ်စ်ကားလည်းစထွက်ပြီ။ဘီ့လ်ကိုသူမ,မမြင်ရတော့ပေ။ ဒီတော့မှ ဘီ့လ်ကို သူမလိပ်စာမပေးခဲ့မိတာသတိရသည်။ ဘီလ်၏လိပ်စာကိုမေးဖို့ရော သူမသားအငယ်ဆုံး၏နံမည်က ဘီလ်ဖြစ်သည်ဆိုတာကိုပြောဖို့ ပါမေ့ခဲ့ပြီ။